Inseparable Bros 2019 – Myanmar Subtitles
Genre: Comedy, Drama Director: Sang-Hyo Yook Actors: Esom, Ha-kyun Shin, Kwang-soo Lee Country: South Korea Released: 01 May 2019 Score: 7.2 Duration: 114 min Quality: 720p Web-DL H265 Years: 2019 View: 1,992
“Inseparable Bros” (2019)
တဈခြို့ Page တှကေပွနျထားပမေဲ့လဲ စာဖိုငျမမှနျတာမြိုးတှရှေိနတောကွောငျ့မလို့ ကြှနျတျောလငျးထိုကျအောငျက စာဖိုငျပွနျညှိပွီးတော့
တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ စာဖိုငျက စက်ကနျ့လေးတှနေညျးနညျးစောနပေမေဲ့ အတတျနိုငျဆုံးပွနျညှိပွီးတော့ တငျဆကျပေးထားပါတယျ။
Translated By Moe Pwint Khine And Encoded By Lin Htike Aung
Download Size – 720p WEB-DL H265 (1.33GB)
ခေါငျးစဉျလေးအတိုငျးပဲ သှေးသားရငျးခြာမဟုတျပမေယျ့ ခှဲလို့မရအောငျခဈြကွတယျ့ မသနျမစှမျး
ညီအကိုနှဈယောကျရဲ့အကွောငျးလေးပါ..Running man မှာ ရီစရာလေးတှလေုပျတတျတဲ့ သဈကုလားအုတျ
Lee Kwang Soo ဟာ ဒီကားထဲမှာတော့ Runningman ကဇာတျရုပျနဲ့ကှဲထှကျပွီး ဉာဏျရညျခြို့တဲ့တဲ့ ဒုနျဂူအဖွဈသရုပျဆောငျထားပါတယျ..
တဈဦးမတ်ေတာ တဈဦးကစတေနာဆိုသလို..မသနျမစှမျးအခငျြးခငျြး အတူတူနထေိုငျပွီး အပွနျအလှနျကူညီကွမယျဆိုရငျ
လောကကွီးဟာ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပြျောစရာ..နခေငျြစရာကောငျးတယျဆိုတဲ့ mesasge ကိုလညျး ဒီကားထဲမှာ
တှရေ့မှာပါ..လူတှေ မတ်ေတာတရားတှေ ကိုယျခငျြးစာတရားတှခေေါငျးပါးလာခြိနျ…လောကဒဏျရဲ့ဒဏျကို ခံရလို့
စိတျဓါတျကနြသေူတှေ ဒီကားလေးကိုကွညျ့ရငျ စိတျဓါတျခှနျအားလညျး ရနိုငျပါတယျ ညီအကိုနှဈယောကျမှာ တဈယောကျက မသနျမစှမျး တဈယောကျက ဉာဏျရညျမမှီသူ ဒီနှဈဦးဘယျလို အတှဲညီညီသှားမလဲဆိုတာ ဇာတျကားလေးကိုဆကျကွညျ့စခေငျြပါတယျ… ရီလညျးရီရ ပညာလညျးရမယျ့ဇာတျကားလေးပါ တဈခုတော့မှာပါရစေ စကွညျ့လိုကျရငျ မထခငျြအောငျစှဲထားနိုငျလို့ ဇာတျကားမကွညျ့ခငျ လုပျစရာရှိတာအရငျ လုပျထားကွပါ လှတျသှားရငျ နှမွောဖို့ကောငျးလို့ ? ဒီကားလေးက 2019 ခုနှဈထှကျ Drama/Comedy အမြိုးအစားထဲမှာဆိုရငျတော့ အကောငျးဆုံးဇာတျကားထဲက တဈခုလို့ဆိုနိုငျပါတယျ Rating အနနေဲ့ဆိုရငျ Imdb မှာ 10 out of7ရထားပွီး My Drama Listမှာဆိုရငျ 8.9/10 ထိရထားပါတယျနျော ဇာတျကားထဲက Cast တှကေတော့ Se Ha အဖွဈ Drama တှပေိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသားကွီး Shin Ha Kyun , Dong gu အဖွဈ အားလုံးရဲ့ အခဈြတျော သဈကုလားအုတျလေး Lee Kwang Soo, Nam Mi Young အဖွဈ Lee Som တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ☺️အမြိုးအစားကတော့ Drama/Comedy ပါ ဘာသာပွနျကတော့ Indo sub ကို Listening ကိုပဲ အားကိုးပွီးဘာသာပွနျထားတာမို့ အနညျးငယျ အလှဲအမှားရှိရငျ ခှငျ့လှတျပေးစခေငျြပါတယျ ဒါပမေယျ့ စာတနျးထိုးကို ကိုရီးယားအဓိပ်ပါယျ အသုံးအနှုနျးတှအေတိုငျး Listening ကိုသခြောနားထောငျပွီးပွနျထားတာမို့ အဆငျပွမေယျလို့တော့ ထငျမိပါတယျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ☺️
အညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျကတော့ Moe Pwint Khine ပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ Korea Movies လေးတှေ Korea Series လေးတှတေငျစခေငျြရငျ Cmt မှာဝငျရောကျတောငျးဆိုသှားလို့ရပါတယျ။
တစ်ချို့ Page တွေကပြန်ထားပေမဲ့လဲ စာဖိုင်မမှန်တာမျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်လင်းထိုက်အောင်က စာဖိုင်ပြန်ညှိပြီးတော့
တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖိုင်က စက္ကန့်လေးတွေနည်းနည်းစောနေပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ညှိပြီးတော့ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပဲ သွေးသားရင်းချာမဟုတ်ပေမယ့် ခွဲလို့မရအောင်ချစ်ကြတယ့် မသန်မစွမ်း
ညီအကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးပါ..Running man မှာ ရီစရာလေးတွေလုပ်တတ်တဲ့ သစ်ကုလားအုတ်
Lee Kwang Soo ဟာ ဒီကားထဲမှာတော့ Runningman ကဇာတ်ရုပ်နဲ့ကွဲထွက်ပြီး ဥာဏ်ရည်ချို့တဲ့တဲ့ ဒုန်ဂူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးကစေတနာဆိုသလို..မသန်မစွမ်းအချင်းချင်း အတူတူနေထိုင်ပြီး အပြန်အလှန်ကူညီကြမယ်ဆိုရင်
လောကကြီးဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပျော်စရာ..နေချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ mesasge ကိုလည်း ဒီကားထဲမှာ
တွေ့ရမှာပါ..လူတွေ မေတ္တာတရားတွေ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေခေါင်းပါးလာချိန်…လောကဒဏ်ရဲ့ဒဏ်ကို ခံရလို့
စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေ ဒီကားလေးကိုကြည့်ရင် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားလည်း ရနိုင်ပါတယ် ညီအကိုနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က မသန်မစွမ်း တစ်ယောက်က ဥာဏ်ရည်မမှီသူ ဒီနှစ်ဦးဘယ်လို အတွဲညီညီသွားမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားလေးကိုဆက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်… ရီလည်းရီရ ပညာလည်းရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ တစ်ခုတော့မှာပါရစေ စကြည့်လိုက်ရင် မထချင်အောင်စွဲထားနိုင်လို့ ဇာတ်ကားမကြည့်ခင် လုပ်စရာရှိတာအရင် လုပ်ထားကြပါ လွတ်သွားရင် နှမြောဖို့ကောင်းလို့ ? ဒီကားလေးက 2019 ခုနှစ်ထွက် Drama/Comedy အမျိုးအစားထဲမှာဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားထဲက တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် Rating အနေနဲ့ဆိုရင် Imdb မှာ 10 out of7ရထားပြီး My Drama Listမှာဆိုရင် 8.9/10 ထိရထားပါတယ်နော် ဇာတ်ကားထဲက Cast တွေကတော့ Se Ha အဖြစ် Drama တွေပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသားကြီး Shin Ha Kyun , Dong gu အဖြစ် အားလုံးရဲ့ အချစ်တော် သစ်ကုလားအုတ်လေး Lee Kwang Soo, Nam Mi Young အဖြစ် Lee Som တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်☺️အမျိုးအစားကတော့ Drama/Comedy ပါ ဘာသာပြန်ကတော့ Indo sub ကို Listening ကိုပဲ အားကိုးပြီးဘာသာပြန်ထားတာမို့ အနည်းငယ် အလွဲအမှားရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စာတန်းထိုးကို ကိုရီးယားအဓိပ္ပါယ် အသုံးအနှုန်းတွေအတိုင်း Listening ကိုသေချာနားထောင်ပြီးပြန်ထားတာမို့ အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ ထင်မိပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်☺️
အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ကတော့ Moe Pwint Khine ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Korea Movies လေးတွေ Korea Series လေးတွေတင်စေချင်ရင် Cmt မှာဝင်ရောက်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်။
(1.33GB) Download Soliddrive Myanmar 720p
(1.33GB) Download Filerocks Myanmar 720p
#Inseparable Bros 2019 #Download Inseparable Bros 2019 Full Movie #Free Inseparable Bros 2019 Download